सिरानीमुनी के छ ? - Kantipath.com
सिरानीमुनी के छ ?
काठमाडौं – तपाईको सिरानीमुनी के छ ? धेरैले भन्छन्, २/ ४ पैसा । अनि महिलाले जवाफ दिन्छन्, कपाल बाध्ने रबर । कतिपयले भन्छन्, ‘सजिलो हुने हुँदा मोबाईल राखीन्छ । तर त्यसो होईन । वास्तुशास्त्रका अनुसार तपाईले आफ्नो सिरानीमूनि यी कुरा राखेर सुत्दा तपाईको विपत्ति दुर हुन्छ । र जीवनमा नया नयाँ ढोकाहरु खुल्नेछन् । यसअर्थ आजै राम्रो कामको सुरुवात किन नगर्ने ?
-राति सुतेको समयमा सिरानी मुनि गीता हुनु राम्रो हुन्छ ।
राति सुत्ने समयमा सिरानी मुनि मुला राखेर सुती भोलीपल्ट विहान उठेपछि उक्त मुला शिवलिंगलाई चढाउँनाले राहुको दोष निवारण हुन्छ ।
कतिपयले हनुमान चालिस राख्न पनि सुझाएको पाईन्छ ।
तामाको भाँडामा पानी राखेर विहान उठ्नासाथ उक्त पानी पिउनुहोस् । बचेको पानीलाई कुनै गमलामा हाल्नाले तपाइको मनोकामना पूरा हुन्छ ।
लसुनमा हुने भोल्टाइल तेलको गन्धले शरिरमा गर्मी पैदा गर्छ । यसले रुघा तथा सर्दीको समस्या हटाउँछ ।
फलामजन्य उपकरण तपाईको सिरानीमा फलामजन्य उपकरण राख्नुहोस् ।
सिरानीमुनी फूल राख्दा पनि राम्रो हुन्छ ।
दक्षिण दिशामा शिर अनि उत्तर दिशामा गोडा पारेर सुत्नु सर्वोत्तम मानिन्छ । यदी यसरी सुत्नुभयो भने धेरै बिमारी लाग्न पाउँदैनन् । हामीले दक्षिणतिर शिर पारेर सुत्दा यो ऊर्जा हाम्रो शिरबाट पसेर गोडाको बाटो हुँदै निस्कन्छ ।
पति–पत्नीबीचको सम्बन्धमा छटपट छ भने मंगलबारको राति मुङको दाललाई कुनै हरियो रंगको कपडामा बाधेर सिरानीमुनि राखेर सुत्नुहोस् र विहान उठेर उक्त कपडा कुनै कन्यालाई दान गनुस् वा दुर्गा मन्दिरमा चढाउनुहोस् ।
Previous Previous post: प्रहरीकाे दादागिरी : चिनियाँ रास्ट्रपति सी नेपाल आउदा पत्रकारलाई फोटो खिच्न राेक (हेर्नुस् भिडियो)
Next Next post: कालिकोटमा डेंगुको उच्च जोखिम
उद्धारलाई हेलिकप्टर थलारा
खोपसँगै पर्यटनमा उत्साह
२०७६/२०७७ को बजेटः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ४६ अर्ब सिलिङ
शैक्षिक सत्र शुरु भएको तीन सातापछि मुगुमा पुग्यो पाठ्य पुस्तक
साबधान : बच्चालाई सुताएर दूध खुवाउनु हुन्छ ?